Block iyo barkinta Messages Facebook on Facebook.com
Facebook ayaa dynamically beddelo siyaasadda ay gaarka ah inta lagu guda jiro dhowrkii sano ee la soo dhaafay. Iyadoo qaar ka mid ah isbedelada ayaa dhab ahaantii aad u waxtar, qaar ka mid ah ayaa halkii aan macquul ahayn u ogolaanaya dadka in ay fara gaarka ah mid ka mid ah ayaa ka badan sidii hore. Waxaa la sameeyey hab fudud oo loogu talagalay dadka si ay u soo xiriir kaliya hal wax oo siyaabo qaar ka mid ah waxay noqon kartaa mid si dhab ah looga naxo. Maqaalkani waxa aad qaadataa iyada oo qaar ka mid ah goobaha Facebook aad u aasaasi ah oo ku saabsan la helo fariimaha. Maqaalkani waxa uu ku bari doonaa sida loo hayn dadka aan loo baahnayn oo ka fog mailkooda aad u wanaagsan.
Hadda ka hor, Facebook siiyaa qof kasta iyadoo ay xulashada ah in gab ah "Farriin" doorasho ku waqtiyada si ay go'aansan lahaa hadii kaliya saaxiibada ay doonayeen in ay iyaga ama saaxiibo ah saaxiibada ay la xiriiri iyo wixii la mid ah. Laakiinse haatan, ka shaqeynayaan tani ma sii diyaar u isticmaala waa. Sidaas, haddii aad hesho farriimo la rabin qof, waxaad leedahay laba siyaabood oo wax ka qabato xaaladda. Waxaan si gooni gooni ah ka wada hadli doonaan, kuwaas oo laba siyaabood oo faahfaahsan iyo eegno geedi socodka si ay u hirgeliyaan mid kasta oo iyaga ka mid ah.
1.Set aad shaandhaynta fariin inay "adag"
Sidaas oo dhan fariimaha aan la rabin (fariimaha dadka ka kuwaas oo aan aad saaxiibo) si aad "Qaar kale" folder halkii aad mailkooda tegi doonaa. Taas macnaheedu waa in inta aad weli la helo fariimaha kuwa, ay ma uu doonaynin in aad cayayaanka dambe adigoo aad mailkooda.
Si tan loo sameeyo, raac tilmaamaha hoose ku siiyey;
1. Log in aad Facebook account ag maraya in www.facebook.com via biraawsarkaaga iyo galaya sax ah username iyo password Facebook.
2. Riix tuuryo gaarka ah, ee soo socda si tab ee farriimaha on xaq sare ee shaashadda, dhibic ka hoos menu click on "yaa ii soo xiriiri kartaa" iyo dooran "darantahay shaandhaynta". Shaandhaynta darantahay ma ha aanu fariimaha in ay yihiin qof kale oo aan ahayn saaxiibadaa si ay si toos ah u soo diray inuu aad mailkooda. Si kastaba ha ahaatee, haddii mar uun aad sida hoos ogolaanshaha aad ilaaliye aad si fudud ku noqon karaa "shaandhaynta aasaasiga ah" ka dib, taas oo inta badan ka mid ah fariimaha la diray lahaa in aad mailkooda ahayn "Qaar kale" folder dareemaan.
3. Haddii ay taasi ma xalin dhibaatada sida qofka uu ku keeni karo waa in liiska aad saaxiib ayaa, si fudud iyaga aad unfriend karo. Tani waxay ka dhigi doonaa dhammaan fariimaha ay mustaqbalka in laga sifeeyo wuxuu u diray "Qaar kale" by default. Laakiin waxaa laga yaabaa in aad leedahay si aad iyaga la saarto sheekaysiga hore ugu horeysay ee shaandhaynta in uu dhaqan-.
2.Block qofka ka kuwaasoo mar dambe ma aad rabto in aad hesho farriimo
Haddii unfriending sidoo kale ma aha xal shaqayn karta si aad xaaladda oo aad si fudud u aadan doonayn in aad ka maqashaa qof kale mar dambe ama haddii aad dareensan tahay in arrimuhu ka baxay gacantii aad si fudud u xannibi karaa isaga / iyada. Habkan in qofka ma awoodi doonaan in ay dhamaan kuu soo diri fariin kasta, booqo profile, aad DEAD in posts ama waxaad ku dari sida saaxiib ah arrintan. Laakiin, xusuusnow in aad ma xakameyn kartid dadka si wadajir ah; halkii aad leedahay si aad ku xanibin mid mid. Si aad u billowdo dadka ka xanibeen, raac tallaabooyinkan:
1. Hel profile qofka isticmaalaya bar raadinta ee geeska bidix ee kore ee aad newsfeed.
2. Fur isaga / iyada profile. Next in button fariinta waxaa jiri lahaa button kale la "..." it on. Waxaa Riix oo ka hoos hoos menu, dooro "Block". Xusuusnow in ka dib markii ay ka xanibeen qof, ma qof in booqan kartaa profile ama kuu soo diri fariin midna waxaad booqan kartaa inuu profile iyo diri isaga / iyada fariin.
3. Haddii aad ula kac ahayn xannibi qof aad iyaga mar walba tubada kartaa adigoo tegaya goobaha iyo doorataa "Joojinta" ka menu bidix ee shaashadda. Waxaad arki doonaa liiska dadka oo dhan in aad ka hor istaagay. Waxaad si fudud u riixi kartaa "tubada" uu qoray magaca qofka aad rabto in aad tubada, oo isna waa laga mamnuucay mar dambe doonaa ka booqanaya profile ama fariin kuu soo dirayaa.
4. Xusuusnow in marka aad xannibi qof, ay si toos ah u tirtiray liiska saaxiibkaa u. Sidaas darted, haddii aad mustaqbalka ilaa dhayida wax iyaga iyo go'aansato inaad iyaga tubada, waxa aad helaysaa in ay u diraan codsi saaxiib inuu mar kale iyaga ka dhigi qayb ka mid ah liiska saaxiibkaa u. Qodob kale oo aad maskaxda ku hayso waa in furid waa laba geesood ah. Taasi waxay ka dhigan tahay in laga qaxo qof ayaa sidoo kale aad u jireyso xidhiidhka ka dhamaadka qofkaas oo dhan.
Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah Facebook ayaa laga yaabaa in debecsan wax badan hadda, laakiin ay weli qaar ka mid ah xuquuqda naftaada in sida go'aan si aad uga indhokuhaynta oo sidaas awgeed, noloshaada. Maqaalkani waxa uu idin bara sida loo isticmaalo xuquuqda kuwa si sax ah. Haddii aadan haysan in loo cagajugleeyo ama u qabsan laheyd ama careysiisay mar dambe qof. Waxaad si fudud u hor tegi kartaa raac tilmaamaha ku xusan siiyo iyo takhaluso iyaga ka mid ah.
> Resource > Talooyin > Sida loo Block iyo barkinta Messages Facebook on Facebook.com